Basa reMagariro evanhu
Ndivanaani isu uye chii chiri chinangwa chemutemo uyu wega?
Iyi purogiramu yepachivande inoratidza kuti MH Industry ("MH", "isu" kana kuti "isu") inoshandisa uye inodzivirira ruzivo rwemunhu iwe watipa iyo paunoshandisa webhusaiti ino.
Ruzivo rwemunhu ndeye ruzivo runogona kukuratidza iwe semunhu mupenyu, iwe pachako kana kuti kana uchishandiswa pamwe chete nedzimwe ruzivo ratinenge tabata kana kuti rungangodaro. Iyi purogiramu yepabonde inotsanangura kuti tinoshandisa nekudzivirira sei ruzivo rwemunhu hwedu rwatinotora kubva kwauri kana uchishandisa webhusaiti ino.
Kana uine mibvunzo pamusoro peiyo purogiramu yega yega kana kushandiswa kwemashoko ako ega woga taura nesu. Ndapota enda kune chikamu "Ungatitaurira sei" pasi apa. Muchikamu ichocho tinosarudza kero yedu yekubhadhara, nhamba yedu yefoni uye email yedu kero.
Ko kana iwe usingafari nemutemo wepabonde?
Kana iwe usingabvumirani nemashoko ako ega ari kushandiswa maererano nemutemo wepabonde iwe unofanira kurega kushandisa iyi webhusaiti pakarepo. Ndapota cherechedza kuti haungakwanisi kutenga zvigaro kana mazano kubva kwatiri kuburikidza newebsite ino kunze kwekunge iwe ugovera humwe ruzivo rwemunhu kwatiri kuitira kuti iwe ubhabhatidzwe kushandisa iyi webhusaiti uye kuitira kuti tigadzirise urongwa hwako.
Ko zvakadini nekuvandudzwa kwemutemo wepabonde?
Isu tinogona kuchinja iyi purogiramu yekusimudza nguva nenguva nekuvandudza peji ino. Unofanira kuongorora peji ino nguva dzose. Kuenderera mberi kwako kushandiswa kwewebsite ino mushure mokuchinja kwave kuchiitwa paya iyi purogiramu yekusvitsa ichaendeswa kuratidza kuti waverenga uye wakagamuchira chero shanduko. Iwe haufaniri kushandisa webhusaiti iyi kana iwe usina kufara nemhando ipi zvayo kuchinangwa chemukati wehutano uye iwe unofanira kutitaurira kana kuchinja ikoko kunoreva kuti iwe hausisiri kufara nenzira iyo yatinoshandisa nayo data yako pachako.
Ndeupi ruzivo rwemunhu wega rwedu rwatinotora
Kana iwe uri mumwe wevatengi vedu (izvi zvinosanganisira vatengi vebhizimisi nevatengi) uye kana ukanyoresa kushandisa mamwe mapeji ewebsite ino, kusanganisira (somuenzaniso) kuitira kutenga zvigaro nemasebvu kubva kwatiri, tichakupa kuti upinde pamapeji iwayo . Isu tinogona kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kwauri sechikamu chekunyora kwekuita; sechikamu chekutengesa nzira yeIndaneti; uye kuti uwane kubvumirwa kwako kubvumira kutengesa zvakananga kutumirwa kwauri. Mashoko ega ega atinowana kubva kwamuri anogona kusanganisira:
zita rako, zuva rokuberekwa uye ruzivo rwekukurukurirana (zvakadai sekureta uye e-mail kero (es) uye nhamba yefoni (s));
ruzivo pamusoro pezviitiko zvako nemishandiro edu nemabasa;
yako MH user ID (iyo Coats ichakupa) uye iwe password (izvo iwe uchaisa). Iwe uchabvunzwa kuti upe ID yako yevashandi nephasiwedi nguva dzose paunopinda kushandisa iyi webhusaiti);
kutaurirana kwako kwakananga kushamwaridzana uye kubvuma (tapota ona chikamu "Marketing Direct" pasi apa kuti uwane mamwe mashoko);
chikwereti chako chekwereti / debit card; and
(maererano nevanotengesa mabhizinesi bedzi) tsanangudzo yebhizimisi rako nemabasa ayo, izvo zvinogona kusanganisira mamwe mashoko evanhu.
Urongwa urwu harusi huwandu uye hunogona kuongororwa munguva yemberi. Iko kuratidzika kwakanaka kwehumwe humwe ruzivo rwemunhu watinogona kuwana iye zvino kubva kwamuri.
Chii chatinoita nemashoko edu ega atinounganidza?
Tichashandisa ruzivo rwako pachako kune zvinangwa zvebhizimisi zvakakodzera, somuenzaniso:
kugovera iyi webhusaiti uye chibvumirano chedu kana humwe hukama huri newe, kusanganisira kuitira kupa zvigadzirwa nemabasa edu kwamuri;
kuti uongorore nzira yaunoshandisa nayo webhusaiti ino nechinangwa chekuvandudza zvishandiso nemashandiro atinopa uye kushambadzira kwedu uye mabasa ekutsvaga uye nezvekutsvakurudza kwemusika zvine chokuita nekuvandudza zvakafanana (tinogona kutaurirana iwe pachako nekuda kweizvi kana kubvunza vanhu vatatu kuti tiite saizvozvo nekuda kwedu - tapota taura kune chikamu "Ndivanaani isu tinogovana mashoko aya ne" pasi);
kuti utarise uye upindure kune chero hukuru hwekukurukurirana, kubvunzurudza kana kushanda kwaunoisa kwatiri;
kukutumira iwe kutengeserana zvakananga pamusoro pezvigadzirwa zvedu nemashandiro (asi kana iwe chete paunopa kubvumirana kwakakodzera kubvumira izvi - tapota ona chikamu "Marketing Direct" pasi); and
kuti titevedze mitemo yedu, kutonga uye zvimwe zvakanaka kutungamirirwa kwehutungamiri.
Urongwa urwu harusi huwandu uye hunogona kuongororwa munguva yemberi. Iko kuratidzika kwakanaka kwezvimwe zvezvinangwa zvezvino izvo zvatingashandisa nhepfenyuro yako pachako yakaunganidzwa kuburikidza newebsite ino.
Ndianiko watinosangana nemashoko ako ega ega?
Kunze kwekunyatsotsanangurwa pasi apa, hatingazofambisi, kuzivisa, kutengesa, kuparadzira kana kubhadhara ruzivo rwako rwemunhu kune vamwe vatatu (kureva chero mumwe munhu kana sangano) kunze kwekuti tine mvumo yako kana tichibvumirwa kukazivisa izvi nemutemo kana nzira yepamutemo.
Tinogona kutengesa ruzivo rwenyu rwemunhu kune mumwe munhu kana sangano kana zvichidiwa sechikamu chematongerwo ematongerwo emitemo (semuenzaniso apo mutungamiri wedu kana hutungamiri huri kutorwa nesangano rekunze). Tinofanira kuita izvi tive nechokwadi chokuti yakaitwa maererano neMutemo.
Isu tinogona kudiwa nemutemo kana mutemo wekutonga kuti ubudise ruzivo rwako pachako kumakurukota epamutemo (kureva madarere, madare, mapurisa kana mabasa ekuchengeteka). Kuti urambe uine kuvimbika kwewebsite ino uye kuchengetedza zvinodiwa nevatengi varo nevanyori, tichaita chero chipi zvacho chikumbiro chakadai. Mukuwedzera, tinogona kudikanwa kuzarura ruzivo rwako pachako kuvakuru vehurumende kune mutero kana zvimwe zvinangwa. Mune dzimwe mamiriro ezvinhu tinogonawo kusarudza kuti pane chikonzero chaicho chekuzivisa pachena hupfumi hwako kune zviremera zvepamutemo uye kuti kuzarurirwa kwaizove kwakarurama uye kwakatenderwa pasi peMutemo.
Mashoko ako ega ega anogona kupfuudzwa uye anoshandiswa nemakambani ese ari muboka reMH, mamwe acho ari kunze kweChina. Tingazongopfuudza ruzivo rwenyu kune mamwe makambani kuti tivabvumire kuitarisa kuitira kuti vape mabasa kwatiri.
Mukuwedzera, pangava nemamiriro ezvinhu umo zvakakosha kuti isu tive nekuzivisa mashoko ako ega kumakambani kunze kana masangano kuitira kuti tidzivirire vatengi vedu kana zvatinoda zvatinoda. Kuzivisa kwakadaro kwaizobvumirwa pasi peMutemo wakaratidza kuti vaifanira kuchengetedza izvo zvaifarira uye zvaive nekutakura kwakakwana mupfungwa dzako.
Ko ruzivo rako pachako ruchaendeswa kunze kweChina here?
Nhoroondo yatinowana kubva kwauri inogonawo kugadziriswa nevashandi vanoshanda kunze kweChina vanoshanda kwatiri kana mumwe wevatengesi vedu. Vashandi vakadaro vanogona kubatanidzwa, pakati pezvimwe zvinhu, kubata nhoroondo yako pachako, kuzadzikiswa kwehurongwa, kushandiswa kana kuti mashoko ako okubhadhara uye kupa kwebasa rekubatsira. Nokuisa dheinhau yako pachako, unobvumirana nekudhinda, kuchengetedza kana kushandiswa. Tichatora matanho ose zvakafanira kuti tione kuti data yako inobatwa zvakachengeteka uye maererano nemutemo uyu wega.
Kwatakakupa (kana kuti kwawakasarudza) password iyo inoita kuti iwe upinde zvimwe zvikamu zvesaiti yedu, iwe une dambudziko rekuchengeta iyi password inovanzika. Tinokukumbira kuti urege kugovera password neyese.
Zvinosuruvarisa, kuendesa kwemashoko kuburikidza neInternet hakusi yakachengeteka zvakakwana. Kunyange zvazvo tichizoita zvatinokwanisa kuti tidzivirire dunhu rako rega, hatigone kuvimbisa kuchengetedzwa kwemashoko ako anotengeswa kune site redu; chero hutachiona huri panjodzi yako pachako. Kana tangowana ruzivo rwako, tichashandisa nzira dzakasimba uye kuchengetedzwa kwekuchengetedza kuedza kudzivirira kusabvumirwa kusina kubvumirwa.
Zvakadini kana uri kushandisa webhusaiti ino kubva kunze kweChina?
Kana uri kushandisa webhusaiti iyi kubva kunze kweChina, mamwe mimwe mitemo inogona kushanda pakugadziriswa kwemashoko ako ega. Tinoshandisa iyi webhusaiti kubva mukati meChina. Hatisi pasi pemitemo yemunharaunda yenyu uye iyi purogiramu yega yega inogona kunge isingabvumirani nemitemo iyoyo. Iwe haufaniri kuisa ruzivo rwako pachako kwatiri kunze kwekuti iwe unofara nechinzvimbo ichi.
Ko zvakadini nemashoko asina kuziviswa?
Isu tinogona kushandisa uye kubudisa ruzivo muhutano (kureva kuti munhu mumwe nomumwe nevatengi havagone kuonekwa) pakushambadzira uye zvinangwa zvekugadzirira. Mashoko iwayo haazove ezvo ruzivo rwako pachako nokuti iwe haugoni kuonekwa kana kuonekwa kubva pauri. Izvi zvinoreva kuti izvi hazvina kana mutemo wepabonde kana Mutemo ungashanda.
Tinodzivirira sei ruzivo rwenyu rwemunhu?
Kuti udzivise kusabvumirwa kusina mvumo kana kuzivisa, kukuvadza kana kurasikirwa kwemashoko ako ega, tinotora zvakakodzera muviri uye zvemagetsi, sangano uye zvigadzirwa zvekugadzirira kusvika pakuguma, maererano nemitemo yedu pasi peMutemo. Izvi zvinogona kusanganisira kuvharidzira (semuenzaniso, iyi webhusaiti inzvimbo yakachengeteka uye kutumira kune uye kubva kune ino yepaiti ichave yakanyorwa).
Iwe unofanirwa kuchengetedza zvakavanzika zveUnited ID yako uye password iyo inobatanidza nekuwana kwako kune mamwe mapeji ewebsite ino uye / kana chero kero yako yawakagadzira nesu. Unobvumirana kubvuma mutoro wezvinhu zvose zvinowanzoenderana nekufanana. Iwe haufaniri kutendera vamwe vanhu kuti vashandise ID yako yekushandisa kana kuti password yako. Ndapota tibvunzei isu nokukurumidza tichishandisa tsanangudzo iri mu "Chikamu chekutaura nesu" pasi apa kana iwe uchitenda kuti ID yako yekushandisa kana password ingangoderedzwa. Hatisi kuzova nehanya newe kana pane kusabvumirwa kusina kubvumirwa kwemashoko ako ekutumira kana basa risingabvumirwi pane ino webhupu semugumisiro wezvenhau yako-inowanikwa kuzivikanwa nemumwe munhu, kunze kwekuti izvi zvingakonzerwa nekushaya hanya kwedu.
Pasinei nekuedza kwedu pamusoro pekuchengeteka zvakakosha kurangarira mupfungwa kuti internet haisi nzira yakachengeteka yekukurukurirana. Ruzivo rwemunhu oga runotumirwa kuburikidza neIndaneti rinogona kutorwa nevamwe vanhu. Hatigone kuvimbisa kuchengetedzwa kwemashoko ega ega akatumirwa kwatiri kuburikidza newebsite ino. Iwe unobvuma kuti iwe unoshandisa webhusaiti ino pachako iwe pachako.
Iyi webhusaiti haifaniri kushandiswa nevana vaduku pasi pezera re 13 uye saizvozvo tinokumbira kuti vana vaduku pasi pezera re 13 vasatumira chero ruzivo rwemunhu kwatiri kuburikidza newebsite ino. Tinokurudzira kuti vabereki nevadzidzisi vanoyeuchidza vana vavo kuti vagadzirise dheinhi ravo pachavo zvakachengeteka uye zvine musoro paIndaneti.
Iyi webhusaiti ine zvisungo kune mamwe mawebsite. Mukuwedzera, mamwe mawebsite kunze kwekutonga kwedu angabatana newebsite iyi. Isu hatisi mhaka yehutano hwehutano uye zviri mukati mawo mamwe mawebsite. Iwe unofanirwa kuchenjerera uye kutarisa zvinyorwa zvemagariro zvinoshandiswa kune webhusaiti iri mubvunzo.
Cookies uye web beacons
Isu tinogona kushandisa "cookies" pawebsite yedu. Cookies ma data files anochengetedza ruzivo pamusoro pekutsvaga kako kana mushandisi zvinoreva kuti webhusaiti yedu inogona kuona kuti iwe wakashanyira webhusaiti yedu kare. Vanoita kuti zvive nyore kwauri kuti uchengetedze zvaunofarira pawebsite ino, uye nekuona kuti iwe unoshandisa sei webhusaiti, tinogona kuigadzirisa pane zvaunofarira uye ona kuti iwe unoshandisa sei.
Iwe unogona, kana iwe ukasarudza, disable makonkiti kubva mu browser yako uye bvisa ma cookies ose akachengetwa pakombiyuta yako. Pamusoro peInternet Internet Explorer, izvi zvinogona kuitwa nekusarudza 'Zvigadzirwa / Zvimwe Zvekutsvaga' uye kuongorora zvirongwa zvako zvepachena kana kusarudza 'bvisa ma cookies'.
Iwe unogona kuziva kuti ungaita sei izvi kune imwe browser yako nekunyanya 'rubatsiro' pane mhinduro yako. Zvisinei, dzakawanda zvehupenyu hwedu hwehutachiona hazvizoshanda kana iwe ukadzivirira makiki.
Isu tinogona kushandisawo michina yemagetsi inozivikanwa se "web beacons" pane ino webhusaiti uye mune zvigadzirwa zvinobudiswa kubva pakushandisa uye / kana kunyoresa pane webhusaiti ino, zvakadai sekunyora ma-mail. Webb-beacons inowanzoshanda pamwe chete nekiki uye inoshandiswa zvimwe zvinangwa.
Takaisa mazita akazara emakiki anoshandiswa pa mh-chine.com pasi, pamwe chete netsanangudzo yekuti cookie inoshandiswa chii. Nguwo haingashandisi makiki kuti uwane mashoko anozivikanwe pamusoro pako.
mh-chine.com inoshandisa Google Analytics, web analytics service inopiwa neGoogle, Inc. Google Analytics inogadzira cookie kuitira kuti iongorore kushandiswa kwedu kwewebsite yedu uye kuunganidza mishumo pamusoro pebasa rekushandisa.
Google inochengetedza ruzivo rwakakonzerwa nekiki kumaseji muUnited States. Google inogonawo kutumira mashoko aya kuvanhu vatatu apo inofanirwa kuita izvi nomutemo, kana kuti vanhu vatatu vakabata mashoko pamusoro peGoogle. Google haisati ichishandise idiresi yako yep IP nedzimwe nhepfenyuro inobatwa neGoogle. Nokushandisa mh-chine.com, unobvumirana nekugadziriswa kwe data pamusoro pako neGoogle nenzira uye nekuda kwezvinangwa zvataurwa pamusoro apa.
mh-chine.com inoshandisa nhamba yevashambadziri avo vanoisawo cookies pa webhusaiti yedu nekuda kwedu kuitira kuti vagoverera mazano avanopa. Rongedzo yekiki yechitatu yekiki inoshandiswa pa mh-chine.com uye iyo imwe neimwe inoshandiswa iyo inowanikwa pasi apa.
Kudzokorora uye kuwana kuwana kana ma kopi emashoko ako ega
Kana chero ruzivo rwemunhu rwamakapa kwatiri rwusina kubva kune imwe nguva kana kuti rwakarurama, ndapota tidzidzei nokutaura nesu ne email kana nepositi tichishandisa tsanangudzo iri mu "Chikamu chekutaura nesu" pasi apa.
Kana iwe uchida kuwana kuwana kana ma kopi ehupenyu hwemunhu hwatinenge tabata pamusoro pako tapota tibvunze isu nenzira imwecheteyo.
Kana iwe ruzivo rwako pachako rungashandiswa pakutsvaga zvakananga kwekutengesera tichaita kuti rive pachena pamapeji akakodzera ewebsite ino. Panguva imwe chete isu tichatsvaka kubvumirwa kwako kugamuchira kushambadzira zvakananga kana tichakubvumira kuti usarudze kubva pakugamuchira izvi (zvichienderana nezvinodiwa pasi pemitemo inoshanda).
Mukutengeserana kwakatumirwa kunotumirwa nefoni kana ne e-mail, SMS, voicemail kana imwe nzira dzemagetsi dzatingakupa nenzira ine nyore yokurambazve kutengesa zvakananga nenzira yakakodzera. Kana ukarambazve kutengesa zvemagetsi, hatidi kubvisa ruzivo rwako rwebhuku kubva kune dhesi (s) yedu asi nokukurumidza zvingaita tinogona kuona kuti iwe wakashandura pfungwa dzako. Izvi zvinoreva kuti isu tinogona kuramba tichibata ruzivo rwenyu rwemunhu (kusanganisira mashoko ako okutaura) mune fomu yakadzvinyirirwa, kuitira kuti tive nechokwadi chekuti hatikukurukuri iwe zvakare.
Kana pane imwe nguva imwe nguva iwe unoda kuchinja pfungwa dzako pamusoro pokutengesa zvakananga iwe unogona kusarudza chero nguva. Iwe unogona kuita izvi kana nekuvandudza zvaunofarira kuburikidza newebsite ino kana kutitumira nesu ne-mail kana kuti zvinyorwa tichishandisa tsanangudzo iri mu "Chikamu chekutitumira nesu" pasi apa.
Kupera kwekodha yako uye kuchengetwa kwemashoko ako ega
Maererano neMutemo tinozoita kuti ruzivo rwako rune ruzivo haruna kuchengetwa kwenguva yakareba kudarika zvakakosha nokuda kwechinangwa chaicho kana isu nevamwe vatatu vanozviitira isu.
Tinochengetedza kodzero yekuramba basa kana kubvisa kero yako nesu isu tisati taona.
Kana tikagumisa konti yako kana kana ukarasa akaunti yako, tichaivhara nokukurumidza sezvinobvira uye tichengetedze ruzivo rwenyu pachavo kubva panguva iyo chete kana zvichidikanwa kana pane chero matambudziko emutemo kana mamwe matambudziko. Pashure penguva iyo ruzivo rwako pachako rucharambidzwa mukati kana kubviswa kubva pane d database yedu (s).
Mutemo unokupa kodzero yekuwana ruzivo rwakachengetwa pamusoro pako. Kodzero yako yekuwanika inogona kushandiswa maererano neMutemo. Chero chero chikumbiro chekugadzirira chingave chiri pasi pebhadharo ye £ 10 kuti usangane nemari yedu mukukupa nemashoko ehutano hwatinahwo pamusoro pako.
Nzira yekubatana nesu
musha musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --- Thread Factories --- Ribbon & Tape Factories --- Laces Factories - Sei kusarudza isu --MH History - Tara Shows --Image Galleries --Video Album MH Culture - Zvikoro Zvikuru --MH Dreams - Basa rezveMhuri Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Inzvimbo yakakodzera --Gadzira nzvimbo --Feedback Community --Join Us --News